नेपालमा अब यस्ता ६ मोटरसाइकल पाइन्छ सस्ताे मुल्यमा ! – Khula kura
मोटरसाइकल आवस्यक पर्ने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकल उपयोगी मानिन्छन् ।अहिले नेपालमा विभिन्न कम्पनीले यही सेग्मेन्टमा थुप्रै मोडलको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।
अहिले बजारमा उपलब्ध २५० सीसी क्षमताको विभिन्न कम्पनीका ६ मोडलको बारेमा हामीले जानकारी दिदैँछौ ।
बेनेली बीएन-२५१ः २४९ सीसी क्षमताको बेनेली टीएनटी-२५१ बाइकको मूल्य ५ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बेनेली बीएन २५१ मा उपलब्ध इन्जिनले अधिकतम ९८०० आरपीएममा २५ बीएच पावर तथा ८००० आरपीएममा २१ एनएम टर्क प्रदान गर्ने क्षमता राख्छ । ६ स्पीड गियरबक्स दिइएको यस मोटरसाइकलको उच्चगति १४५ किलोमिटर प्रतिघन्टा रहेको छ ।
सीएफ मोटो-२५० एनकेः सीएफ मोटो २५० एनके नेपालमा उपलब्ध अर्को २५० सीसी मोटरसाइकल रहेको छ । यो बाइकले ९००० आरपीएममा २७ बीएच पावर तथा ७५०० आरपीएममा २२ एनएम टर्क प्रदान गर्छ ।
यसमा पनि ६ स्पीडको गियरबक्स रहेको छ । यसको दुबै चक्कामा डिस्क ब्रेक र एबीएस सुबिधा उपलब्ध रहेको एनके २५० को मूल्य ५ लाख २५ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
के माधब नेपाल सग्ँ ओलि किन डराएका हुन त ? यस्तो छ कारण